असहयोग गर्ने भए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोज्न थाले ! | Nepal Ghatana
असहयोग गर्ने भए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोज्न थाले !
प्रकाशित : २२ माघ २०७८, शनिबार २२:२०
एमसीसी समझौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज विभाजित छ । त्यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारुढ गठबन्धनमा समेत खटपट शुरु भएको छ ।
सत्तँसाझेदारी दलहरुले एमसीसी अनुमोदन गराउन असहयोग गर्ने भए पछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको साथ खोज्न थालेका छन । एमालेले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिन सभामुख हटाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमा ओली-देउवाको समान धारणामा छ । एमाले कांग्रेस मिल्दा संसदमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । तर संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटा एमाले-कांग्रेसका लागि बादक बनेका छन् ।